DEG DEG:-Saraakiishii Ugu Sareysay Hey’ada (NISA) Oo Sababo aan la shaacin shaqada looga fadhiisiyay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
DEG DEG:-Saraakiishii Ugu Sareysay Hey’ada (NISA) Oo Sababo aan la shaacin shaqada looga fadhiisiyay
Muqdisho (Mareeg News ) wareegto kasoo baxday xafiiska taliyaha Nabad Sugida iyo sirdoonka qaranka Somaaliyeed ayaa Shaqada laga joojiyay Taliye ku xigeenka koowaad iyo kan labaad ee Hey’ada Nabad sugida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya.
Warqad uu soo saaray Taliyaha NISA Xuseen Cismaan Xuseen ayaa shaqada looga joojiyay Sare guuto Cabdalla Cabdalla Maxamed iyo Gaashaanle sare Cabdulqadir Maxamed Nuur Jaamac oo ah taliye ku xigeenka kowaad iyo kan labaad ee Nabad sugida Soomaaliya.
Iyadoo Qaraxyo isdaba joog ah ay maalmihii lasoo dhaafay ka dheceen magaalada muqdisho ayaana la ogeeyn Sabata shaqa ka joojinta saraakiishan waxaana suura gal in shaqa joojinta lagu sameeyay saraakiisha uga sareeysay Hey’ada nabad sugida iyo sirdoonka qaranka ay kamid naqan karto Isbadalada ay dowlada ku dooneyso ineey wax uga qabato amaanka Faraha kasii baxaya ee magaalada muqdisho.
Wixii ku soo kordha waxaad uga bogan doontaan wararkeena soo socda.
Madaxweyne Farmaajo Oo Shir Aan Caadi Aheyn Ka Furaya Brussels
Taliyaha Ciidanka Booliska Oo Muqdisho Kulan Kula Qaatay Wafdi Ka Socda